Munyori: Erwin Welker, Shessi, Hauke ​​Keitel, Greg Mutemo http://raubkatzedermeere.wordpress.com
The Focke-Wulf FW 200 Condor aiva German vaitakurwa nezvifambiso ndege kana nhumbi muna 1938, vagotendeuka kupinda nepagungwa patrol ndege panguva Second World War.
pasuru iri rakagadzirirwa FS2004 uye FSX / P3Dv1V2 +. Complete wedzera-mberi gauges uye netsika mitinhimira.
MuHondo Yenyika II, vanhu FW 200 akanga Akave nokuvandudza nekuti zvakafunga ari Luftwaffe. Zvakanga kunyanya yakanyatsokodzera ushori mishoni pamatunhu pamakungwa somunhu bhomba. It rakatangwa sechikwata pamwe Ngarava dzepasi pemvura. The FW 200, iyo zita remadunhurirwa rokuti "denda Atlantic" by Churchill, akamhanya dzakawanda omubatanidzwa zvavatengesi pavakanga kushandiswa sezvo chikwata / Ndege pamusoro Atlantic kusvikira 1943.
Personal FW 200 Condor kubva Adolf Hitler, vakatakura insignia pamusoro Die Fliegerstaffel Fuehrers pamusoro mhino